Shiinaha Fused Silica Soo-saare iyo Badeecad | Dinglong
Dinglong silica laysku daray waa silica daahir sare oo koronto kuxiran. Silica Fused wuxuu leeyahay cufnaan hoose, kuleylka kuleylka hooseeya iyo u adkeysiga kuleylka kuleylka ee aadka u fiican. Waxyaabahani waxay ka dhigayaan waxyaabo aad u faa'iido badan oo dhinacyo badan leh oo loo isticmaalo dib-u-dhiska, macdanta, elektaroniga iyo codsiyada kale ee gaarka ah. Dinglong silica la isku qurxiyo ayaa lagu heli karaa labadaba bur iyo noocyo hadhuudh ah.
Waxaa lagu heli karaa labadaba bur iyo noocyo hadhuudh ah
Waxyaabo badan oo loo adeegsado arjiga diidmada ah
Waxaa laga heli karaa labada qaybood ee cabbirka walxaha caadiga ah iyo kuwa caadiga ah
Dinglong silused silica waxaa loogu talagalay is-caabbinta kuleylka kuleylka ah ee ugu fiican, guryaha kuleylka, iyo isuduwaha hoose ee balaarinta kuleylka. Silligeena isku dhafan waxay si fiican ugu shaqaysaa codsiyada diidmada ah ee u baahan xasilloonida cabbirka iyo halka kuleylka loo baahan yahay.
Maalgashiga maalgashiga, silica la isku daray ayaa loo isticmaalaa xasiloonida muggeeda. Xaqiiqdii, silica la isku daray wuxuu leeyahay isugeyn balaaran kuleylka oo aad u hooseeya isla markaana si aad u adag loo tuuro ayaa loo soo saari karaa iyadoo laga saaro qolof fudud.
Silligeena isku dhafan ayaa leh adkeysi koronto oo aad u sareeya iyo kuleylka kuleylka oo hooseeya, sidaa darteed waxaa loo isticmaalaa sida buuxinta walxaha isku xira epoxy-ga ee semi-conductors.
Dinglong wuxuu soo saaraa waxyaabo fara badan oo silica ah oo la isku qasay iyo buundooyin gaar ah oo alaab ah, oo ay ku jiraan darajada dalab diidmada ah, darajada elektaroniga, heerka fasalka. Dhammaan alaabada silica la isku qurxiyey waxaa lagu soo saaray xaalado si taxaddar leh loo kontaroolay waxaana loo habeeyay joogteyn iyo isku halleyn si loogu oggolaado macmiilkeennu inuu u sameeyo alaab nadiif ah iyo darajo sax ah cabbir ahaan.
Dinglong silica la isku qurxiyo ayaa lagu heli karaa labadaba bur iyo noocyo hadhuudh ah. Waxaan bixinaa labadaba heerka iyo qaybinta cabbirka cabbirka. Khubaradayada ayaa kula shaqeyn doona si loo xoojiyo codsigaaga. Waxyaabaha silica ee dinglong la isku qurxiyo ayaa laga heli karaa 2,200 lbs. (1,000 kg) jawaano cufan.
Qalabkan silica ee la isku daray waxaa lagu soo saaray xarun la xaqiijiyay oo ku taal Lianyungang, Shiinaha. Waxaan si buuxda isugu dhafnay si loo hubiyo in si buuxda loo xakameeyo tayada iyo sharafta qalabkeena quartz laga soo bilaabo miinada ilaa macaamilka. Waxaan haynaa in kabadan 30 sano oo khibrad ah soosaarida alaabada quartz waxaana naga go'an inaan si joogto ah uga shaqeyno hagaajinta qalabkayaga quartz iyadoo lala kaashanayo macaamiisheena.
Hore: Silica Fused for Refractory Codsiga